Golaha Ammaanka oo Mudadii u kordhiyey Amisom | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Golaha Ammaanka oo Mudadii u kordhiyey Amisom
Golaha Ammaanka oo Mudadii u kordhiyey Amisom
Muqdisho (SNTV):- Golaha Ammaanka ee QM ayaa muddo kordhin u sameeyay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya kaddib kulan ay ku yeesheen magaalada New York, waxaana ay gaarsiiyen illaa dhamaadka bisha May sanadka soo socda ee 2019.
Goluhu waxa uu sheegay in ay muhiim tahay howlaha nabad ilaalinta ee midowga afrika ee haatan ka hayaan Soomaaliya.
U qaabbilsanaha cunaqabataynta QM ee Soomaaliya iyo Eretria, Khayrat Cumaraof, ayaa kulanka kaga war-bixiyay socdaal uu dhawaan ku tegey Waddamo dhowra oo ku yaalla geeska Afrika.
Mr. khayrat Cumaraof ayaa Golaha ugu war bixiyay booqashadii ugu danbaysay ee uu ku tagay Dalalaka Jabuuti, Kenya iyo Soomaaliya, isagoo intaas ku daray inaysan u suura gelin inay tagaan Dalka Eritrea.
Mudane Cumarof ayaa aad u soo dhaweeyay dadaalada xoogga leh ee ay xukuumadda Soomaliya ugu jirto sugidda amniga iyo ka hagaajinta hay’adaha kala duwan ee Dowladda, isagoo ku baaqay inaan si buuxda cuna qabataynta Hubka looga qaadin Soomaaliya inta ay wax iska beddelayaan arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Sarkaalkan ayaa soo dhaweeyay heshiiska nabadeed ee ay Dowladaha Itooboiya iyo Eritera ay ku gaaraeen Asmara 8-dii July ee Sanadkan, ayagoo soo gaba gabeeyay is fahan waagi ka dhexeeyay muddo 20 sano ah, soona celiyay xiriirka diblomaasiaydeed ee Labada Dal.
Previous articleRa’iisal wasaare Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Qardho
Next articleWasaaaradda Haweenka Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay Shir looga hadlayo Sharciga Daryeelka Carruurta Afrika.